विद्या भण्डारीलाई निरन्तर 'झम्टिरहेकी' रामकुमारी झाँक्री
उनले बाँया हातमा एउटा पातलो ‘कालो ध्वजा’ बाँधेकी थिइन्। ‘प्रतिगमन मुर्दावाद’ लेखेको एउटा कालो टालो छातीमा भिरेकी थिइन्।
मञ्चमा उक्लिएर उनले त्यो टालो निकालिन् र फ्याँकिदिइन्। मुख छोपिएको नीलो सर्जिकल मास्क निकालिन्।
त्यसभित्र पनि दुईसरो कालो टेपले उनले आेंठ थुनेकी थिइन्। उनले त्यो पनि खोलिन्।
अनि हजारौं कार्यकर्ता र नेताको बीचमा ‘रामकुमारी झाँक्री’ बल्ल प्रकट भइन्।
नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका ‘प्रचण्ड–माधव’ नेपालहरुले देशभरबाट हज्जारौं मानिस बुधबार काठमाडौं ल्याएका थिए।
त्यो समूहले बिहानैदेखि राजधानीका सडक थुनेर भृकुटीमण्डप सडकमा एउटा विरोध सभा गरेको थियो। त्यसमा बोल्ने एक वक्ता पनि थिइन्, रामकुमारी।
र, आज उनको भाषणको ‘थिम’ थियो, ‘बोल्न पाइन्छ।’
गत माघ १६ गते रामकुमारी झाँक्री उनकै समूहको एउटा आमसभालाई सम्बोधन गर्न गोरखा गएकी थिइन्। त्यहाँ उनले राष्ट्रपतिलाई खुब गाली गरिन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर उनले राष्ट्रपतिलाई तथानाम भनिन्। र, तत्कालीन एमालेले भुलवश सुरु गरेको ‘सेतो सारी’को संस्कारको प्रत्युत्पादकका रुपमा विद्या भन्डारीलाई चित्रण गरिन्।
त्यसपछि उनको चर्काे आलोचना भएको थियो। सामाजिक सन्जालदेखि सार्वजनिकरुपमा । सडकमै उनका विरुद्ध अभियान नै छेडिएका छन्।
महिलालाई होच्याएर, महिलाको अस्मितामाथि धावा बोलेको आरोप उनीमाथि छ। जिल्ला–जिल्लामा ओली पक्षका महिला समूहहरुले रामकुमारीलाई पक्राउ गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी तथा प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन्।
तर, पनि उनी चुप लागेकी छैनन्। राष्ट्रपति(विद्या भण्डारी)माथि खनिइरहेकी छिन्।
र, बुधबार भृकुटिमण्डप मञ्चमा विद्या भन्डारीमाथि झाँक्री आक्रमणको अर्काे संस्करण थियो।
‘महिला अस्मिताविरुद्ध’ बोलेको भन्दै देशभर भएका ‘आलोचना’हरूलाई उनले राम्रैसँग जवाफ फकाइन्।
बुधबार उनले यस्तो भनिन् :
हामी बोल्न जन्मेका हौ। नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौं। हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने।
कार्यकारीको प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको असिस्टेन्टजस्तै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई खुसुक्क सही छाप गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति । यो सम्माननीय पद होइन संस्था हाम्रो बलिदानीले पाएको संस्था हो। हाम्रो शीरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरिरहेको छैन म।
त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरंकुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भने त्यस्तो पात्रका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कस्ले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर?
एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर? महिला अस्मिता त त्यतिबेला बलात्कृत भएको छ। निर्मला पन्तजस्तै, भागरथी भट्टजस्तै बालिकाहरूको बलात्कृत भएका छन्। हत्या भएको छ। त्यतिबेला महिला अस्मिताको हत्या भएको छ, बलात्कृत भएको छ। अस्मिता बेचिएको छ, खण्डित भएको छ।
एउटा तानाशाह, बन्दै गरेको अहंकारी, सर्वज्ञानी, सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने ब्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। यहाँनेर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन। कुनै पनि पदमा लिंग हुँदैन त्यो सार्वजनिक पद हो त्यसैले बोल्न पाइन्छ।
आज यही १८ वर्षसम्म विद्या भन्डारीले प्राईवेट कम्पनी बनाएको एउटा अनेमसंघ भन्ने संस्था छ, त्यसका सदस्यहरुले महिला अधिकारको गफ गर्दैछन्। मलाई सुन्न हेर्न र समाचारहरुमा पढ्न मन छ भागरथीहरुको हत्यारालाई कारबाही गर भनेर गृहमन्त्रालय पुगे कि पुगेनन्। मलाई प्रश्न गर्न मन छ।
गोरखामा झाक्रीले यस्तो भनेकी थिइन्–
राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्ने। बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ अस्ति निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै।
म बडामाहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि सुख सुविधा छोडेर, कारगेड छोडेर, शितल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्।
चावहिल कि कोटेश्वर कतातिर बसाइ छ भन्ने सुन्याथेँ। होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। र, नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्। तपाईसँग म पनि अलि भारी हुन्छु होला। यहीँबाट रेखा लोप्चनलाई चुनाव लडाउँछौं र हराउँछौं। तपाईका लागि म पनि भारी हुनसक्छु।
त्यसकारण बडामहारानीले हामीले प्राप्त गरेका हामीले संघर्ष गरेर ल्याएका अधिकारहरुमाथि गिद्दे दृष्टि लगाएर एउटा गुटको खास गुटको मान्छेको तुष्टि फेर्नका लागि गरिएका असंवैधानिक कदम किमार्थ पनि स्विकार हुनसक्दैन।
यो नेकपा एमालेले ५० सालमा गरेको भुल थियो। यहाँ अन्यथा नहोस् यहाँ तमाम महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। सहिद परिवार हुनुहुन्छ। यहाँहरुलाई भन्न खोजेको होइन। मदन भन्डारीको हत्यापछि सेतो साडी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने जुन गलत संस्कृतिको सुरुवात गरेको थियो नेकपा एमालेले त्यसको प्रतिउत्पादन हो विद्या भन्डारी। जो आज यो संविधानको चीर हरण गर्ने कारण बनेको छ। त्यसकारण संस्कृति पनि सही हुनुपर्ने रहेछ। धरानमा हामीले चुनाव हार्नुको कारण पछाडि पनि त्यही हो।
धरानका मेयर बित्नुभो। त्यहाँ मेयरका श्रीमतिलाई टिकट नदिएको भनेर भोल हालिएन। त्यहाँ कांग्रेसले जित्यो। सेन्टिमेन्टको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङको राजनीति पनि बन्द गर्नुपर्नेरहेछ।